Nazi Izindlela Ezi-10 Ongakhuphula ngazo Ukuzibandakanya Nokuqukethwe Okubukwayo | Martech Zone
NgoMsombuluko, Juni 28, 2021 NgoLwesithathu, Okthoba 13, 2021 Douglas Karr
Isu elibalulekile ekuhleleni kabusha kwethu nasekuhlanganiseni umphakathi bekugxile kokuqukethwe okubukwayo. Ukwabelana nge-infographics esezingeni eliphakeme kusayithi lethu kukhuphule ukufinyelela kwethu futhi kungivumela ukuthi ngixoxe ngokuqukethwe okukubo nesabelo ngasinye. Le infographic evela eCanva yehlukile - ukuhamba nomuntu ngazo zonke izindlela ezahlukahlukene ongenza ngazo okuqukethwe okubukwayo. Futhi ngithokozela kakhulu iseluleko esibalulekile abasinikezayo:
Okuqukethwe okubonakalayo kukunikeza inkululeko yokubhala ukwenza umlayezo wakho ngendlela oyifisayo, sebenzisa amasu ahlukahlukene nezindlela zokuxhumana ukuze udlulise umlayezo wakho, kuyithuluzi eliwusizo impela.
Umehluko uyisihluthulelo esinjalo online. Njengoba sibhala i-athikili ngemuva kwendatshana, kufanele sisebenze kanzima ukuyihlukanisa nezinkulungwane zezinye izindatshana ezishicilelwa nsuku zonke kuwebhu. Faka okukodwa okubukwayo, noma kunjalo, futhi i-athikili iba nomqondo omusha ngokuphelele kubavakashi bakho. Hhayi lokho kuphela, i- ukwabiwa yaleyo ndatshana inyuka kakhulu.
Kule infographic, Canva ikukhombisa Izinhlobo eziyi-10 Zokuqukethwe Okubukekayo Okumangazayo umkhiqizo wakho kufanele ngabe udala khona manje:
Izithombe Ezidonsa Amehlo - Abathengi abangama-93% bathi izithombe yizona # 1 ezithatha isinqumo lapho bethenga imikhiqizo.
Amakhadi we-Quote akhuthazayo - Ama-Quotes akhombisa amanani akho, kulula ukwakha, futhi abiwa kakhulu.
Izingcingo Ezinamandla Zokwenza - Amabhizinisi angama-70% awanakho ukubizelwa esenzweni yize ababukeli kungenzeka ukuthi bathathe izinyathelo.
Izithombe ezinophawu - Ukusebenzisa izithombe ezinemininingwane nezinegama kungakusiza ukuthi unake izithameli ezingama-67%.
Ukubukwa kwedatha okuthakazelisayo - Abantu abangama-40% baphendula futhi baqonde imininingwane ebonakalayo kangcono kunombhalo ocacile.
Ukubandakanya amavidiyo - Ngama-9% kuphela amabhizinisi amancane awasebenzisayo, kepha abathengi abangama-64% bathambekele ekuthengeni ngemuva kokubuka ividiyo.
Amathiphu, amaqhinga, nokuthi ungakwenza kanjani - Inikeza inani nokusetshenziswa komkhiqizo wakho futhi isiza ekwakheni igunya.
Izithombe-skrini ezifundisayo - Abantu abangama-88% bafunda izibuyekezo ukuthola ikhwalithi yebhizinisi, thatha isithombe-skrini sezibuyekezo zakho!
Imibuzo ecasulayo - Ikhuthaza ukwabelana, ingxoxo, ukuzibandakanya nokuqwashisa ngomkhiqizo.
infographics - Kunesizathu sokuthi kungani Highbridge kuveza ama-infographics amaningi kumakhasimende ethu! Banamathuba ama-3 okwabelwana ngawo futhi amabhizinisi asebenzisa i-infographics abika inzuzo eyi-12% ephakeme kunaleyo engakwenzi.
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene we Canva futhi ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuhambisana kulesi sihloko.
Tags: izithombe ezinophawui-canvaamavidiyo ahlanganyelakanjani-toinfographici-infographicsizithombeIzithombeimibuzoamakhadi wokucaphunaama-skriniTricksizinhlobo zokuqukethwe okubukwayovideosisithombe esibukwayo
Sep 14, 2017 ku-6: 56 AM
I-athikili enhle ne-infographic. Okuqukethwe okubonakalayo nokuphrintwayo kuthinta kakhulu ukudlulisela umyalezo wethu webhizinisi kwabanye.